Medical Writings ဆေးပညာစာများ: Q and A December 2010 (10)
Q and A December 2010 (10)
1. Ortho Micronor (Noretbindrone 0.35mg) တားဆေးကဒ်ကို ဘယ်လိုသောက်ရပါမလဲ
2. ရာသီလာရင် လေရော ရောလာနေပါတယ်
3. တစ်ချို့က ခရုသင်း၊ သမင်ဖြူ ဟုပြောကြပါသည်
4. Pseudo vulgaris ဆိုတာ ဘာရောဂါလဲ
5. အဲဒီလို ဖြစ်ပြီဆိုရင် စိတ်တွေပါ မငြိမ်တော့ဘူး
6. စအိုဝ မှာ အသားပိုလို့ ခေါ်ရမလာမသိဘူး
7. ကိုယ်ဝန်ရှိနေပြီ ကလေးယူလို့ မဖြစ်သေးဘူး
Dec 29, 2010 at 5:49 AM
Q 1: ဆရာရှင့် ORTHO MICRONOR (Noretbindrone 0.35mg) တားဆေးကဒ်ကို ဘယ်လိုသောက်ရပါမလဲ။ ရာသီလာပြီးမှ သောက်ရမှာလား မလာခင်သောက်ရမှာလား။ သောက်နည်းသိချင်ပါတယ်။
• Ortho Micronor® Tablets (0.35 mg Norethindrone) ဆိုတာ Progestin hormone ဟော်မုန်း တမျိုးထဲသာပါတဲ့ ကိုယ်ဝန်တားဆေးဖြစ်တယ်။
• ၉၅-၉၉့၅% ထိရောက်တယ်။
• ရာသီလာ မမှန်တာ၊ ခေါင်းကိုက်တာ၊ ရင်သား တင်းတာ၊ ပျို့တာ၊ ခေါင်းမူးတာတွေ ဖြစ်တတ်တယ်။ တချို့မှာ ဝက်ခြံထွက်တာ၊ ဝလာတာဖြစ်တယ်။ တချို့ မျက်နှာမှာ အညိုစက်မျိုး ပေါ်လာတတ်တယ်။
• Phenytoin, Carbamazepine, Rifampin ဆေးတွေနဲ့ တွဲမသောက်တာ ကောင်းတယ်။
• ဒီဟော်မုန်းကနေ မျိုးဥထွက်တာကို တားပေးတယ်။ သားအိမ်အဝက ထွက်နေကြ အကျိအချွဲကို ပိုပြီး စေးပြစ်စေလို့ သုတ်ပိုး ဝင်လာမှာကို ခက်ခဲစေတယ်။
• နေ့တိုင်း အချိန်တူမှာ ဆေးသောက်ရင် ပိုထိရောက်တယ်။ ဆေးကို အစာနဲ့ နီးနီး-ဝေးဝေး သောက်နိုင်တယ်။
• ရာသီစလာတဲ့နေ့ စသောက်ပါ။ ဟော်မုန်း ၂ မျိုးတွဲဆေးလို ရာသီရက်ကို စောင့်-ကျော်စရာမလိုဘူး။
• ဆေးကို တကပ် ကုန်ရင် နောက်တကပ် ဆက်တိုက်သောက်ပါ။ ရက်မခြားစေနဲ့။
• သောက်နေကြအချိန်မှာ တိတိကျကျ သောက်ပါ။
• ၃ နာရီ နောက်ကျသွားမယ်၊ ဆေးသောက်ပြီး အန်ထွက်မယ်ဆိုရင် အဲဒီရက်ကနေ ၄၈ နာရီ အတွင်းမှာ ဆက်ဆံရင် (ကွန်ဒွမ်) သုံးပါ။ မေ့သွားရင် သတိရချိန်မှာ သောက်လိုက်ပါ။
• သတိထားဘို့က ကိုယ်ဝန်ကိုသာ တားနိုင်တယ် လိင်ကတဆင့် ကူးစက်ရောဂါမှန်သမျှ ဘာကိုမှ မတားဘူး။
Q 2: သမီးကအခု ၁၉ နှစ်ရှိပါပြီ။ သမီးအပျိုဝင်ကတည်းက ရာသီလာရင် လေရောရောလာနေပါတယ်။ အဲဒါဘာကြောင့်လဲ သမီးသိချင်လိုပါ။ တစ်ခါတစ်လေဆို လေရော ရောဆင်းလာရင် လမ်းတောင် မလျှောက်နိုင်တော့ဘူး။ ဆေးခန်းပြရမှာလဲ သမီးရှက်လို့ သမီးဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ လေရောသွေးရော ရောရော လာတာဆိုတော့ ဆိုးကျိုးများ ရှိနိုင်မလား။ ကြိုးတွေ ဘာတွေ ခုန်းလိုက်ရင်လဲ သွေးဆင်းဆင်းနေပါတယ်။ အချိန်မဟုတ်ဘဲဖြစ်နေ၊ အမြဲတန်းလိုလိုလဲ ဖြစ်နေတာ။ ဘယ်လို ဆေးတွေ သောက်ရမလဲ၊ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။
လေဆိုတာ သေခြာလား။ ဖြစ်တတ်တာ ရှားတယ်။ ဒီအရွယ်လေးမှာ တခြားရောဂါလဲ ရှိမှာ မဟုတ်ဘူး။ မစိုးရိမ်ပါနဲ့။ အချိန်မဟုတ်ဘဲ ဆင်းတာလဲ ငယ်သေးရင် ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အဖြူဆင်းသေးလား၊ အနံ့ရှိလား။ ယားသလား။ ပိုးတခုခု ဝင်တာရှိရင် လေကို စဉ်းစားနိုင်လို့ပါ။ အဖြူဆင်းတာ နဲနဲလေး၊ ယားလဲမယား၊ အနံ့လဲကင်းရင် ဘာမှလုပ်စရာမလိုပါ။ သံသယရှိရင် Metronidazole တခါသောက် ၁ ပြာ၊ တနေ့ ၃ ကြိမ်၊ ၅-၇ ရက်သောက်ရတယ်။ ပိုးရှင်းသွားမယ်။ အသက်ကြီးသူ၊ ကလေး ခက်ခက်ခဲခဲနဲ့ ဖွါးဘူးသူတွေမှာ သားအိမ်နဲ့ လေရှိတဲ့နေရာ တခုခုကြားမှာ Fistula လမ်း ဖြစ်နေတဲ့ရောဂါ ရှိတယ်။ ဒီလောက်နဲ့ ဆေးခန်း မပြပါနဲ့အုံး။ လိုအပ်မှ အမျိုးသမီး OG နဲ့သာ တိုင်ပင်ပါ။ သွေးအားအတွက် Ferrous sulfate နဲ့ သွေးထွက်သက်သာဘို့အတွက် ဗီတာမင် စီ၊ ဘီ တွေကို သောက်ပါ။
December 27, 2010 9:39 PM
Q 3: ကျွန်တော့် အသက်၃၈နှစ်ပါ။ အိမ်ထောင်မရှိ။ အလေးချိန် ၁၈ဝပေါင်ခန့်။ လူဝပြီး ချွေးအထွက်များပါသည်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁ နှစ်ကျော်ကျော်လောက်ကစပြီး တံတောင်ဆစ်အထက်(နှစ်ဘက်လုံး)၊ ခြေဖမိုး ၂ဘက်လုံး အရေပြားပေါ်တွင်
လက်မဝက်ခန့် အဖြူကွက်လေးများ ပေါ်လာပါသည်။ လည်ပင်းနေရာတွင်လည်း ၄င်းကဲ့သို့ အရောင်ဖျော့သော အကွက်များ ဖြစ်ပါသည်။ ယားယံနာကျင်တာမျိုး မဟုတ်သဖြင့် ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် သတိမထားမိပါ။ တစ်ခြားသူများ ပြောသောအခါမှ သတိထားမိပါသည်။ အရေပြားဆရာဝန်နှင့်ပြကြည့်သော်လည်း ဘာမှသိပ်မပြောပါ။ ဆေးပေးသည့် အတိုင်း လိမ်းကြည့် စားကြည့် ပါသေးသည်။ နယ်ပြန်ရသဖြင့် ရေရှည်မလုပ်ဖြစ်ပဲ မေ့မေ့ပျောက်ပျောက် ပြန်ဖြစ် သွားပါသည်။ အကွက်များကတော့ ဒီအတိုင်းပဲဖြစ်နေပါသေးသည်။ တစ်ချို့က ခရုသင်း၊ သမင်ဖြူ ဟုပြောကြပါသည်။ (မည်သို့ ကွာခြားမှန်းတော့ မသိပါ) ဗိန္ဓောဆေး သမားများကလည်း စိန်ဓါတ်ပါသောဆေးဖြင့် ကုသနိုင်သည်ဟု ပြောကြပါသည်။ အရမ်းတော့ မစားရဲပါ။ ဖြစ်နိုင်လျှင် အင်္ဂလိပ်ဆေးဖြင့် ကုချင်ပါသည်။ မည်ကဲ့သို့သော ရောဂါမျိုး ဖြစ်နိုင်ပါသလဲဆရာ။ ကုလို့ကော ရပါရဲ့လားခင်ဗျား။ ကိုယ့်ဘာကိုယ်တော့ ယားနာလိုကူးစက်ရောဂါ မဟုတ်နိုင်ဟု ထင်မိသော်လည်း ကိုယ်နဲ့ တွေ့ဆုံဆက်ဆံရသည့်သူများအပေါ် အားနာမိပါသည်။
Leukodrerma သို့မဟုတ် Vitiligo ခရုသင်း ကိုဖတ်ပါခင်ဗျား။
December 28, 2010 at 7:14am
Q 4: Pseudo vulgaris ဆိုတာ ဘာရောဂါလဲခင်ဗျ။ ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ ၊ ဘယ်လို ကုသ လို့ သက်သာ (သို့) ပျောက်ကင်းနိုင်မလဲ၊ ဘာတွေကို ရှောင်ရမလဲ ဆိုတာ အသေအချာ သိလိုပါတယ်ခင်ဗျ။
Pseudo-Vulgaris ဆိုတာ “(ဗူလ်ဂါရစ်) ရောဂါအတု” ကို ခေါ်တယ်။ Pseudo ဆိုတာ အတုပါ။ Vulgaris ဆိုတာလဲ အမျိုးမျိုး ရှိသေးတယ်။ Ichthyosis Vulgaris, Pemphigus Vulgaris နဲ့ Acne Vulgaris တွေပါတယ်။ Autoimmune disease ခေါ်တဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ရောဂါ ပြီးစေတဲ့အစွမ်းက ကိုယ့်ကို ပြန်သက်ရောက်နေတဲ့ ရောဂါအမျိုးအစားတခု ဖြစ်တယ်။ ဖြစ်တာ ရှားတယ်။ အနာတော့အနာဘဲ၊ မပျောက်နိုင်လှတဲ့ဝက်ခြံကလဲ ဒီအမျိုးထဲမှာ ပါတယ်။ ဆေးကုရာမှာလဲ လက်ဝင်တယ်။ အရေပြားအထူးကုတွေနဲ့ ကုသရပါမယ်။
Q 5: အခုကျနော် အသက် ၂၈ ပါ။ ဆီးခဏခဏသွားချင်သလို ဖြစ်တယ် တခါတလေ သွားရင် များတယ်။ တခါတလေကျတော့လဲ နဲတယ်။ မိုးအေးလို့ရှိရင် ပိုဆိုးတယ်။ အဲဒါ ကျနော်မှာ အပြင်သွားခါနီးရင် ရေသိပ်မသောက်ရဲဘူး။ နောက်ပြီးတော့ အခုဖြစ်နေတာက အပြင်သွားပြီဆိုရင် ဝမ်းသွားချင်သလို ရှူးပေါက်ချင်သလို ဖြစ်နေတာပါ။ အဲဒီလို ဖြစ်ပြီဆိုရင် စိတ်တွေပါ မငြိမ်တော့ဘူး။ အဲဒီလိုဖြစ်ပြီဆိုရင် ဝမ်းလဲသွားတတ်ပါတယ်။ အခုကျနော့်မှာ အပြင်သွားဖို့ကို ကြောက်နေတယ်။ အရင်တုန်းကတော့ အစာစားပြီးရင် အန်ချင်သလိုကြီးဖြစ်နေလို့ U Kyi Soe နဲ့ပြဖူးပါတယ်။ ဆီးလဲ စစ်ဖူးပါတယ်။ အဲတုန်းက အစာအိမ်မှန်ပြောင်းနဲ့ကြည့်ပါတယ် Result က အစာအိမ်နံရံ ရောင်တာလို့ ပြောပါတယ်။ တခြားဘာမှ မရှိပါဘူး။ ဆီးကလဲ ကောင်းပါတယ်။ ပိုးတွေဘာတွေ မရှိပါဘူး။ ဆေးကတော့ OMEZ Omepraszole 20mg, VOMETA Domperidon 10mg, Adamon Antispasmodic အဲဒါတွေသောက်ရပါတယ်။ ဖြစ်တဲ့အချိန်ပဲ ကျနော် သောက်ဖြစ်ပါတယ်။ စွဲပြီးတော့မသောက်ဖြစ်ပါဘူး။ အဲဒီဆေးတွေကစွဲသောက်လို့ကောရလား။ နောက်ပြီး ကျနော် အခုဖြစ်နေတာတွေက အစားကြောင့်လား စိတ်ကြောင့်လား ဘယ်လိုကြောင့်လဲ။
ရေးပြတာကိုဘဲ ကြည့်ပြောရရင် စိတ်မှာဖြစ်နေတာပါ။ စိတ်အတူးကုဆရာဝန်နဲ့ ကုသင့်ပါတယ်။ ပျောက်သွားမဲ့ရောဂါ ဖြစ်ပါတယ်။ စိုးရိမ်စိတ်ကဲနေတာပါ။ စိုးရိမ်မှုများလို့ ဆီး-ဝမ်းသွားတာကို သိပ်ဂရုစိုက်နေမိတယ်။ ဘာမဆို ပြီးပြည့်စုံချင် နေတယ်။ အကောင်းတွေချည်း ဖြစ်-ရှိနေချင်တယ်။ ဆေးကုလိုက်ပါခင်ဗျား။ စိတ်ချ၊ သက်သာ ပျောက်ကင်းပါလိမ့်မယ်။ ငါ ဆေးမကုရသေးဘူလို့တောင် စိတ်ထဲမထားရင် ချက်ချင်းသက်သာလာမယ်။
Q 6: ဆရာကျွန်မ ( ) နိုင်ငံမှာနေပါတယ်။ ကျွန်မရဲ့ စအိုဝ မှာ အသားပိုလို့ ခေါ်ရမလာမသိဘူး ဖန်ဂေါ်လီလုံးလောက်ရှိတဲ့ အသီးလေးလဲ ထွက်နေပြီး စအိုအတွင်းထဲကို သွင်းလို့လည်းရတယ်။ နံနက် မစင်စွန့်တိုင်းလည်း။ အမျုိုးသမီးများ လစဉ် သွေးဆင်းသကဲသို့ သွေးဆင်းတာ တစ်ပတ်ကျော် ရှိနေပါပြီ။ ဒါကြောင့် ကျွန်မ ခွဲစိတ်ရင်ကောင်းမလား သို့မဟုတ် သောက်ဆေးနဲ့ အဆင်ပြေမလား။
Q and A Piles လိပ်ခေါင်း ရောဂါ အမေး-အဖြေများ ကို ဖတ်ပါ။
Q 7: ကျနော်က အခု (့) မှာ နေပါတယ်။ ကျနော်မှာချစ်သူရှိပါတယ်။ ယူမယ်လို့လဲ ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်။ မယူရသေးဘူး။ ကိုယ်ဝန်ရှိနေပြီ ကလေးယူလို့ မဖြစ်သေးဘူး။ လက်မထပ်ရသေးဘူး။ ဘာသာရေးအရ မယူရဘူး။ ကိုယ်ဝန်က 41 ရက် ရှိပြီး ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာ ပညာပေးပါ။ ဘယ်လို ဖျက်ချရ မယ်ဆိုတာ နည်းလမ်း ပေးပါအုံး ဆရာ။ ကူညီပါဆရာ။
Sorry! ဆရာရေးတာတွေ ဖတ်ရင် ဒီလိုလုပ်ဘို့ အကြံရော လက်ပါ လုပ်မပေးနိုင်တာ သိမှာပါ။ ဗဟုသုတ အတွက်တော့ နည်းဆိုတာတွေ အဆိုး-အကောင်းတွေ ရေးပါတယ်။ ကျန်းမာ-ချမ်းသာပါစေ။
Posted by Dr. Tint Swe at 1:19 PM